Mesut Ozil oo qarka u saaran inuu ka tago Arsenal & Kooxda uu ku biiri doono oo durba la ogaaday
(London) 06 Luulyo 2019. Laacibka khadka dhexe ee Mesut Ozil ayaa la soo warinayaa inuu qarka u saaran yahay inuu ka dhaqaaqo kooxda Arsenal inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Inkastoo uu qandaraas muddo dheer ah u saxiixay kooxda bilihii ugu dambeeyey markii uu naadiga ka tagayey macallin Arsene Wenger, Ozil ayaa la la xiriirinayey inuu ka tagi doono Gunners tan iyo markii uu kooxda yimid tababare Unai Emery.
Mustaqbalka ciyaaryahankan reer Jarmal ee Horyaalka Premier League ayaa shaki la galinayey muddooyinkii ugu dambeeyey, inkastoo ay u muuqato in kooxda ka dhisan Waqooyiga London ay ku dhow-dahay inay xal u hesho xaaladdiisa.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo dalka Turkiga, Kooxda Fenerbahce ayaa fursad u ahaysata inay iibsato kubbad sameeyahan, kaasoo weli heshiiskiisa garoonka Emirates uu kaga harsan yahay labo sanadood.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in uu sidoo kale Ozil, Arsenal kaga tagi karo heshiis amaah ah, Fenerbahce ayaana doonaysa inay u kaxaysato dalka Turkiga oo ay heshiiskaas deynta ah kula wareegto.